Waxaa lasoo gaaray waqtigii ay ku talagashay Kenya in Shiidaalkii Badda Soomaaliya loo qodo | Horn of Africa Observer
Posted on December 24, 2011 by Moment Media Group
Waxaan Ummadda Soomaaliyeed la socodsiinayaa in lasoo gaaray waqtigii aay ku tala gashay Dowladda Keenya in shiidaalka batroolkii badda Soomaaliya loo qodo, ayadoo isla markaasna ay ciidammada Dalka Kenya ku suganyihiin gudaha Dalka Soomaaliya.
Intaas waxaa dheer in dayaaradohoodu ay duqeynayaan magaalooyin Soomaaliyeed.
Waxaa arrin la yaab leh ah annagoo la wada soconna DAMACA aay KENYA ka leedahay Batroolka Badda Soomaaliya oo soo jiitamayay sanooyin badan ayaa haddana dadka qaarkiis (oo Soomaali ku jirto) ay leeyihiin Keenya ayaa Soomaaliya badbaadineysa. Arrintaasi ma ahan arrin caqli gal ah.
Hadaba si aan u fahamno heerarkii ay soo martay damaca Batroolka Badda Soomaaliya, marka hore aan taariikhdan yar dib u jalleecno oo SomaliTalk ay horay usoo diyaarisay:-
2009 bilowgiisii markii Jabuuti lagu soo dhisay xukuumadda FKMG ee uu madaxda ka yahay Sheikh Shariif waxaa durbadiiba April 7, 2009 ay Kenya la gashay heshiis loogu magac daray Isfaham, maalin kaddib April 8, 2009 ayaa DFKMG waxay heshiiskaas u gudbisey UN-ka. April 14, 2009 ayaana website-ka UN-ta lagu daabacay.
Agoosto 1, 2009 ayaa baarlamaanka DFKMG ayaa si aqlabiyad ah heshiiskaas uga dhigay WAXBA KAMA JIRAAN. Go’aankaas baarlamaanka Soomaaliya muddo 8 bilood ah kaddib, ayaa March 12, 2010 Qarammada Midoobey waxay shaaca ka qaaday in heshiiskaas Is-fahamka aan la cuskan karin. Shacabka Soomaaliyeed oo heshiiskaas ka horyimina waxay arrintu ula muuqatay in ay dhammaatay.
Laakiin, arrin taas xagal daacinaysa ayey bilaabeen madaxda xukuumadda FKMG iyo dalalkii damaca watey oo is garabsanaya, taas oo ahayd hindise qorshe cusub oo lagu soo barbaariyey shirkii Soomaalida loo qabtay 21-23 May 2010 ee ka dhacay Istanbuul, Turkiga, kaddib markii Wasiirkii Xannaanada Xoolaha, Dhirta iyo Daaqa ee DFKMG Abuukar Cabdi Cusmaan uu shirkaas Istanbul ka yiri “Aagga Ganacsiga EEZ ee badda Soomaaliya looma cabirin si rasmi ah oo waafaqsan xeerka badaha Adduunka ee Qarammada Midoobey.”
October 14, 2010 ayaa ra’iisul wasaaraha cusub ee DFKMG waxaa loo magacaabay Maxamed C/laahi Farmaajo. Waxaana durbadiiba soo baxay in dib loo soo celinayo qorshahii badda Soomaaliya lagu doonayey in lagu dhaxal wareejiyo. Dabayaaqadii October waxaa soo ifbaxay dublomaasiga cusub ee xukuumaddu u xilsaartay qorshaha cusub.
October 20, 2010 warbixin ay faafisay ECOTERRA ayaa sheegtay in uu jiro dukumiinti cusub oo looga golleeyahay “agaasimid cusub ee aagga ganacsiga badda EEZ” ee Soomaaliya. Dukumiintigaas “loogu magac daray bud-dhigidda ama dib-u-agaasimida aagga Ganacsiga EEZ”, haddii ay saxiixaan DFKG iyo/ama Maamuladda Dawlad Goboleedyada, waxaa dukumiintigaas ku jira weero sheegaya in Soomaaliya iyo/ama Dawlad Goboleedyadu ay tahay in ay ka tanaasulaan xuquuqda ay u leeyihiin baaxadda badda ee ah 200 mayl-badeed, isla markaasna xuquuqdooda lagu xadido ama lagu soo koobo 12 mayl-badeed.”
Janaayo 18, 2011 ayaa waxaa soo shaac baxay heshiis 10 sano ah oo ay shirkadda lagu magacaabo “Sifaynta Badweynta” (Clear Ocean) ay la gashay DFKMG, shirkaddaas oo sheegtay in ay iibsatey Markab milatari oo ay lahaayeen Militariga Norway. Arrintaas waxaa ka hortegey muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku sugan Norway oo xiriir toos ah la sameeyey wasaaradda Arrimaha Dibadda Norway, arrintaas oo sababtay in Janaayo 21, 2011 ay Dawladda Norway joojisey in markabka militari laga iibiyo shirkadda reer Norway.
May 5, 2011 ayaa Wasiirka Wasaaradda Kalluumeysiga, Kheyraadka Badda iyo Bey’ada ee DFKMG, Maxamed Macallin Xasan (Mohamed Moalin Hassan) waxa uu warbaahinta u sheegay sidan: “Waxaan dhawaan ka soo laabtay safar aan ku tegey dalka UK, oo ahaa safar shaqo, shaqadaas oo ku saabsanayd sidii loo soo gabagabayn lahaa hawl in muddo ahba aan ka wadnay oo la xiriirta xadaynta badda Soomaaliya, iyo in aan ka keenay dukumiintigii ugu dambeeyey ee finalka ahaa ee jeexayey xadaynta badda, ayadoo loo sameeyey sida waafaqsan sharciga badaha ee caalamiga ah iyo kan United Nationka ee loo yaqaan United Nations Convention on Law of Sea. Dukumiintigana waa loo gudbin doonaa Qarammada Midoobay, taas oo lagu diiwaan gelin doono xaqa ay Soomaaliya u leedahay in waxa loo yaqaan “Xuduudda Dhaqaale ee u Gaarka ah” Soomaaliya (Exculisive Economic Zone) ay tahay 200 nautical miles oo u dhiganta 370.4 kiiloomitir” – DHEGEYSO.
Waxa kale oo shirkii jaraa’id ee xukuumadda DFMG ee May 5, 2011 lagu xusay “Dokumentigan iyo khariidooyinka la socda waxaa lagu soo daabaci doonaa websiteyada QM”. Taas oo markaas macnaheedu yahay in Kenya oo aan weli loo qoondayn baddeeda ay tixraac u adeegsan karto, dhehina doonto “Maadaama baddiinu ay tahay EEZ, markaas waa in dib loo cabiro” – arrintaas oo ah tii ay shacabka Soomaaliyeed iyo baarlamaanka DFKMG ay ka dhiidhiyeen, kana hor tageen. Waana xagal daacin cusub oo u baahan difaac cusub.
Sida ka muuqata hadalka wasiirka Kalluumeysiga, Kheyraadka Badda iyo Bey’ada ee DFKMG, waxa uu safar ku tegey Yurub, halkaas oo khariidadaha cusub laga soo xaqiijiyey. Gaar ahaan dal kamid ah barwaaqa sooranka Yurub oo sida kor ku xusan ay barwaaqa sooranku ku dadaalayaan sidii Kenya uga caawin lahaayeen sidii ay wada xaajood ugala gasho badda Soomaalida.
May 7, 2011 Ra’iisul Wasaaraha DFKMG ayaa ka dhoofay Muqdisho isagoo kusii jeeda Xarunta QM ee New York, waxaana warsaxaafadeed xafiiskiisa ka soo baxay lagu sheegay “inuu Qaramada Midoobey siin doono warbixin la xiriirta xaaladda dalka uu marayo, horumarka dowladda ay ka sameysey dhinacyo badan sida amniga, dhaqaalaha, gargaarka bani’aadanimo, adeega bulshada, iyo maamul wanaaga.” iyo ” inuu Qaramada Midoobey uu ka dhaadhiciyo go’aankii Golaha Wasiirada ee ahaa in doorashooyinka Madaxda Qaranka dib loo dhigo muddo 12 bilood ah.”
Sida aad wada aragteen waxaa iska cad in Dowladda KMG ay si toos ah iyo si dadbanba ay lug ugu lahayd fududeynta hirgalinta mashruuca Kenya ay wadato.
Waxaannu la wada soconnaa in isqab-qabsiga faraha badan oo soo kala dhex gala Dowladda KMG iyo Baarlamaanka uu salka ku hayo qorshahaan gurracan oo Kenya ay wadato oo ah sidii ay ku hantiyi lahaayeen Batroolka Badda Soomaaliya.
Qorshaha gurracan iyo damaca oo ay Kenya ka leedahay Badda Soomaaliya waa midda gaarsiisay in ay duulaan ku qaadaan Soomaaliya markii uu fashilmay qorshihii la rabay in badda Soomaaliya laga dhigo 12nm oo laga saaray Roadmap-ka (http://somalitalk.com/2011/10/11/no-eez/)
(Shir ay yeesheen Golaha Wasiirada oo uu shir guddoominayey ra’iisul wasaaraha DFKMG ayaa lagu go’aamiyey in “arrimaha badda sida EEZ laga saaro dhammaan dokumentiyada sida Qorshaha Qaranka ee Xasilinta Nabadgelyada iyo Roadmapka.”)
Sidaannu la wada soconno markii uu soo baxay go-ankaasi, Dowladda Kenya waxaay ku dhaqaaqday Qorshihii aay muddo dheer soo diyaarineysay oo ahaa in aay Soomaaliya ku duusho.
Sida uu daabacay wargeyska Kansas City dowlada Mareykanka ayaa la sheegay in 2-sano ka hor uu ku diiday duulaanka Kenya ay ku qaaday Soomaaliya.
Waxaa iska cad in qorshahaan Kenya ay ugu tala galeen in Gudaha Soomaaliya uu ka furmo JAHWAREER oo ah midda illaa iyo maantay na haysata oo hayaddii dastuuriga Soomaaliyeed (BAARLAMAANKII) uu qarka u taaganyahay in uu meesha ka baxo.
Inta JAHWARWWRKAAS lagu jiro awgeed lama arki doono ruux ka hadla Qorshii Kenya aay heshiiska kula gashay SHIRKADAHA SHISHEEYE si aay u qodaan Batroolka ku jira DHUL BADEEDKA SOOMAALIYA oo qoditaankiisa la billaabi doono sanadka 2012.
Halkan ka ka akhrista in la gaaray xilligii batroolka badda Soomaaliya in bililiqadiisa la billaabo sanadkan 2012.
Walaalayaal Waxaa lasoo gaaray waqtigii ay ahayd in si rasmi ah loogu baraarugu in ay ku talagashay Kenya in Shiidaalkii Badda Soomaaliya loo qodo, ayadoo isla markaas dayaarado dagaal ku duqeyneysaa DHUL SOOMAALIEED. Muraadkuna waxuu yahay in aan loo soo jeesannin Mashruucaas Badda Soomaaliya ka socda oo Heshiiskii qoditaanka la billaabayo sanadkan billowgiisa 2012.
Waxaa la ogyahay in: Shirkad kamid ah shirkadaha saamiga ku leh aaggaas waxay sheegtay in sannadkan 2011 ay sahaminta shidaalka aaggaas u qoondaysay US$6 million oo wajiga hore ah. Waxaana warbaahinta loo sheegay in aaggaas laga sameeyey sahaminta nooca loo yaqaan 2D Seismic iyo in dhawaan ay soo gabagaboobeyso in qaar kamid ah aaggaas lagu sameeyo 3D Seismic – taas oo ah farsamo sahamin oo lagu ogaado in badda hoosteeda uu ku jiro shidaal. Waxaana markaas qorshaysan in ceelka koowaad aaggaas laga qodo 2012.
Waxaannu la wada soconnaa in aay jiraan Dowlado iyo Hayado kooban oo dabada ka riixaya qorshaha ay wadato Kenya ayagoo ku gabanaya DAAHA GADAASHIISA daneynayana Batroolka Badda Soomaaliya.
Waxaan Ummadda Soomaaliyeed ka codsanayaa siiba inta awoodda u helikarta in aay beesha caalamka ka dhaadhiciyaan in KENYA aay faraha kala baxdo KHEYRAADKSA ku jira Badda iyo Birriga Soomaaliya oo aay kusoo duushay.
Walaalayaal, JIDKA KALIYA oo noo furan waxuu yahay in banaanbax aan kala go’ lahayn in aan sameyno oo aan uga soo horjeedno duulaankan dalkayagii lagu soo qaaday dhinaca BADDA iyo DHINACA BIRRIGABA.
Somalia is not the first failed state. There were many other countries experienced such difficulties. The UN and the international community supported and rescued, without violating their sovereignty, seas and territorial rights. They were provided with reconstruction and rehabilitation programs of development and peace restoring.
Ugu dambeyntii waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqayaa in ay si aad ah uga horyimaadaan iskudayada iyo heshiisyada lagu doonayo in lagu booboo dhulkooda iyo khayrkaadka ku jiraba. Ma jirto maanta cid noo maqani, waana in aan gacmaha isqabsanno kuna dadaalno wixii tabarteenna ah inaan ku difaacanno dalkeenna.
Waxaan Soomaalida oo idil ka codsanayaa ( Dowladda, Mucaaradka, Shicibka iyo Dowlad Goboleedyada) in aay sameeyaan hal maalin BANAANBAX NABAD AH oo ula jeedadeedu tahay in aan ka badbaadno qorshaha gurracan oo cusub oo lagu boobayo badda iyo dhulka Soomaaliya.
Waxaan soo jeedin lahaa in la isku dayo in la sameeyo Hayad Madax Banaan oo loogu magac daro:-
Xarunta Daraasaadka Qeyraadka iyo Xuduudaha Badda Soomaaliyeed / Somali Marine Resources and Boundaries Studies Center